“Tani doorasho qudha maahee waa badbaado Qaran in uu isbadel yimaado” | Somaliland.Org
“Tani doorasho qudha maahee waa badbaado Qaran in uu isbadel yimaado”
April 27, 2010	Sydney (Somaliland.Org)- Masuuliyinta sarsare ec xisbiga kulmiye ee Australia ayaa isugu yimi shiray ku qabsadeen xaruntooda dhaxe Sydney, Australia. Shirkaas oo ay isugu yimaideen golaha fulintu waxaay kawada hadlen dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin;
-Marxalada dalku maanta marayaa waa mid badbaado qaran u baahan
-Qaabkii ay u wajihi lahaayee kaalinta kaga aadan doorashada oo kabaabiga timi
-Waxyaabeha u qebsoomey iyo waxaa aanu u qabsoomen,
-Xubno miisan leh oo kusoo biiray xisbiga oo laguna casumay.
Ugu horayn waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee Australia Hassan Ahmed .M. Halac oo aad uga waramay si qoto dheer xisbiga bilowgiisii waxyabaha badan ee soo wajahay iyo siday ugasoo dabaasheen oo maanta uu yahay xisbigu mid aad u balaadhan oo gobolada oo dhan gaaray, Xarumaha dhaxe gudaha iyo kuwa debada ee Kulmiye xiriir wacan la leh iyo isku xidhnaansho buuxda.
Waana xisbiga kaligii ka hergaliyey xafiisyana (xarumo)ku leh australia.
Gudoomiyuhu waxaa kaloo hoosta ka xariqay in aad logu diyar gorobo ololaha dorashada taas oo uu ku tilmaamay baaqiisan. Tani dorosho qudha maahee runtii waa badbaado qaran in uu isbadel yimaado!!
Waxaa kaloo hadalki qaatay xoghayaha guud Yusuf Cadani Yusuf oo tilmamay in loo dajinayo system wanagsan oo kooban oo dorashada lugu diyargoroobo iyo gudiga fulineed oo u madex banaan in ay fuliyaan waxwalba oo dorashada la xiriira. Si ay degdeg wax ugu qabtaan.Waxaa kaloo halka ka hadlay Abwan Abdilahi Dabay oo Runtii si wayn u gubaabiyey isaga oo ka hadlaya xaalada wadanku marayo. Ahmed mahamed mahamoud iyo Aboker Ali Cade si kooban ugu waramay inay isku geyno maskax, muruq iyo maalba si aynu u gaadhno hadafkeena oo ah maamulcadaaladiyo aqoon iyo halkar ba ah oo u hor seeda nabad,barwaaqo iyo ictiraaf ba muwaadiniinta reer soomalilan. Gababadii masuuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ee Australia waxaay soo u soo jeediynayaan baaq dhammaan taageerasha xisbigu KULMIYE iyo bulshada reer somalilanba ay u diyaar gorooban dorashada iyo abaabulkeeda kuna badbaadiyaan codkooda dalka iyo dadkaba.
Previous PostTACSI uu dirayo Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYENext PostXisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE oo maanta Gaadhi ugu deeqay Jaamacadda Burco	Blog